Rieter ခရက်ဒစ်သတင်းအချက်အလက်အေဂျင်စီ | Rieter Professional ဥပဒေဆိုင်ရာချေးငွေပြန်ကြားရေးအေဂျင်စီ
ဝန်ဆောင်မှုအတွက် Rieter ခရက်ဒစ်ဗျူရိုရဲ့ဇွဲ
Rieter Credit Co. , Ltd. မှဖောက်သည်များကိုကတိပေးသော "ကြယ်ငါးပွင့်ဝန်ဆောင်မှု" သည် "အာမခံငါးခု" ဖြစ်သည်။ Rieter ခရက်ဒစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်ဖောက်သည်များအားပြည်နယ် ၅ ခုဖြင့်အာမခံချက်ပေးနိုင်သည်။ ၀ န်ထမ်းများ၏လေ့ကျင့်မှုနှင့်အရည်အသွေးအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ Rieter ခရက်ဒစ်သတင်းအချက်အလက်သည်ရှုထောင့်အားလုံးတွင်စံနှုန်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်စေပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်ဘဝကဏ္ wal အားလုံးမှပညာရှင်များကိုစုဆောင်းသည်။ အနီးကပ်ပြီးပြည့်စုံသောလိုအပ်ချက်များသည်အလွန်မြင့်မားသောထောက်လှမ်းမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ကိစ္စရပ်အားလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့သည်Transparent Appeal Channel ၏အထွေထွေမန်နေဂျာအမှုတစ်ခုစီ၏ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေရန်။
ဖောက်သည်များအားနေ့စဉ်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအချက်အလက်များကိုသတင်းပို့ပါ။ ကော်မရှင်သည်ဘယ်သောအခါမျှလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အထွေထွေမန်နေဂျာထံပြန်လည်တင်ပြသည့်ကြီးကြပ်ရေးယန္တရားသည်ကိစ္စရပ်များကိုကြီးကြပ်ပြီးအမြန်ဆုံးဆွေးနွေးသည်။
ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြင်းအထန်တောင်းဆိုသည်။ အမှုတစ်ခုစီသည်ချိန်းဆိုသည့်သဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးရန်လိုသည်။ စာချုပ်ပါအကြောင်းအရာများသည် ၀ န်ဆောင်မှု၏စျေးနှုန်းသည်ဘယ်သောအခါမျှစျေးနှုန်းထက်ကျော်လွန်လိမ့်မည်ဟုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။
စာချုပ်တွင်လျှို့ဝှက်စာချုပ်ပါရှိသည်။ လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် နေ့မှစ၍ စာချုပ်ပါအချက်အလက်များနှင့်စစ်တမ်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဘယ်တော့မှယိုစိမ့်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။အမှုပြီးဆုံးသွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်အားသတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံကိုပေးပြီးစာချုပ်ကိုလျှို့ဝှက်စွာဖျက်ဆီးပစ်မည်။ သင်နောက်ဆက်တွဲဥပဒေရေးရာအကူအညီလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အမှုအချက်အလက်များကိုသက်ဆိုင်ရာတရားရေးဌာနသို့လွှဲပြောင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏စားသုံးမှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ခရက်ဒစ်ဗျူရို၏ ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုသင့်တင့်သောစျေးနှုန်းစာရင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်မကောင်းတဲ့အကြွေးအေဂျင်စီများကလူတွေကိုလိမ်လည်မှုမှကာကွယ်တားဆီးဖို့! အများပြည်သူအားခရက်ဒစ်ဗျူရိုအားမပေးမှီကုမ္ပဏီ၏ "အားသွင်းစျေး" စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကုန်ကျငွေကိုစစ်ဆေးရန်အကြံပြုသည်။ အကယ်၍ စျေးနှုန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဝေသောစျေးနှုန်းထက်ပိုမိုမြင့်မားပါကမှားယွင်းသောစွဲချက်များသို့မဟုတ်လိမ်လည်မှုများကိုသတိပြုပါ။
အကယ်၍ သင်ကံမကောင်းစွာဖြင့်လိမ်လည်လှည့်ဖြားခံရပါကကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလိုင်း 0800-012-312 သို့လည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥပဒေရေးရာအကူအညီနှင့်နောက်ဆက်တွဲကိစ္စရပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးပါမည်။
ထိုင်ဝမ်တစ်လွှား ၀ န်ဆောင်မှုများ: ထိုင်ပေ၊ Xinbei, Taoyuan, Taichung, Tainan, Kaohsiung, Keelung, Hsinchu, Chiayi, Miaoli, Changhua, Nantou, Yunlin, Chiayi, Pingtung, Yilan, Hualien၊ Lianjiang ။ Taipei Zhongnan တွင်မြန်ဆန်သောတုန့်ပြန်မှုစင်တာကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသာအာရုံစိုက်မည်၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘာသာစကားများပံ့ပိုးပေးရုံသာမကထိုင်ဝမ်နှင့်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ဝန်ဆောင်မှုအခြေစိုက်စခန်းများတည်ဆောက်ခြင်း။Taoyuan, Hsinchu, Taichung, Kaohsiung, Hong Kong, Japan အပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းသည်အခြားပါတီ၏လိမ်လည်မှုကိုဖော်ထုတ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သောမုဒိမ်းမှုအောင်မြင်ရန်သော့ချက်မှာကိစ္စရပ်၏သက်သေသာဓကဖြစ်သည်။ သင်သည်ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုရာဇ ၀ တ်မှုကိုတရားစွဲဆိုခြင်းရှိမရှိသင်၏လက်၌ရှိသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ရယူလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏အိမ်ထောင်ရေးသို့မဟုတ်သင်၏ခံစားချက်များကိုပြန်လည်ရယူလိုသည်ဖြစ်စေ Rieter သည်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အခြေအနေအတွက်စေ့စပ်သေချာစွာပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်ကိုစီစဉ်သည်။
နောက်ထပ်အဖော်ပြောင်းလဲသို့မဟုတ်ရုတ်တရက်အအေးဖြစ်လာ? ကျွမ်းကျင်သူများကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်၊ စိတ်အခြေအနေများနှင့်ဆက်နွယ်သောဆက်နွယ်မှုအမျိုးမျိုးကိုပြသရန်၊ ပြproblemနာကိုအသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း၊
ကိန်းဂဏန်းများအရအိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများတွင် 30% ကဲ့သို့မြင့်မားသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုကိုမည်သို့စီမံခန့်ခွဲရမည်နှင့်အခြားမိတ်ဖက်၏ကိစ္စကိုမည်သို့ဖြတ်တောက်မည်နည်း။ ပျော်ရွှင်သောယောက်ျား / မိန်းမတစ် ဦး အနေဖြင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်ကြိုးစားပါ။
စက်မှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာချေးငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုခရက်ဒစ်စစ်ဆေးခြင်း၊ ချိုးဖောက်မှုနှင့်အတုပြုလုပ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်တရားစွဲဆိုခြင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အငြင်းပွားမှုများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အားလွှဲပြောင်းပေးသည်။
စီးပွားဖက်များ၏ပြိုင်ဘက်များ၊ မိတ်ဖက်များ၏အကြွေးစစ်တမ်းများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစစ်တမ်းများ၊ ၀ န်ထမ်းများ၏ Jin Jingye စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအားတားမြစ်ခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်းဖော်ထုတ်ခြင်းစာချုပ်များ၊ လက်ရေးအတုဖော်ထုတ်ခြင်း။
ဝီရိယစိုက်ထုတ်သောအလုပ်များသည်အတုများပြုလုပ်ပြီးအကျိုးစီးပွားများကိုပျက်စီးစေပါသည်။ ချိုးဖောက်မှုများနှင့်အတုပြုလုပ်ထားသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသည်မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများ၊ မူပိုင်ခွင့်များကိုချိုးဖောက်ခြင်း၏သက်သေအထောက်အထားများကိုရရှိပြီးထိရောက်သောတိုက်ခိုက်မှုများအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်တက်ကြွစွာရှာဖွေရမည်။
နိုင်ငံရပ်ခြားရှိစက်ရုံများအတွက်အခွင့်အလမ်းများ၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ကြားခြင်း၊ နိုင်ငံခြားခရီးသွားလာခြင်းနှင့်နိုင်ငံရပ်ခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှမောင်းနှင်ခြင်းများကြောင့်ပြည်ပတွင်ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲများလည်းပိုမိုများပြားလာသည်။
တရားရုံးတွင်ရှိသောသက်သေအထောက်အထားများကိုအဆင့်သုံးဆင့်ခွဲခြားထားသည်။ သက်သေ၊ သက်သေအထောက်အထား၊ စွမ်းအားကိုသက်သေပြနိုင်သောအထောက်အထားနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ထမ်းများ၊
သင့်တွင်ခက်ခဲသောဘဝအငြင်းပွားမှုရှိပါက၎င်းကိုသင်မဖြေရှင်းနိုင် သ၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ပါ
တက်ကြည့်ဖို့တစ်စုံတစ် ဦး ကိုရှာဖွေနေ ပျောက်ဆုံးနေသူကသင့်ကိုမကူညီနိုင်ရင်မင်းကိုကူညီနိုင်ပါတယ်။